डीएनए साक्ष्य मौत पंक्ति कैदी बन्द गर्दछ
16 डिसेम्बर, 1981 मा, लिंडा मे क्रेग्रेन्स, जो कि पेन्सिल्वेनियाका त्रि-राज्य मल मा काम गर्ने एक युवा बिक्री सहयोगी थियो, उनको कारमा अपहरण गरिसकेको थियो। जब उनी घर आइपुगेनन्, उनको पतिले पुलिसलाई बोलाए। निम्न दिन, पीडितको शरीर फेला पर्यो - पीटा, चोरी, र परिक्षण - एक चर्चमा एक माइलमा र उनको कारबाट आधा टाढा। त्यो अझै पनि जमेको थियो, तर हत्याराले उनको गहिरो जाडोको कपडालाई यौन आक्रमण गर्न खुल्यो।
पुलिसले निर्धारित गरेको छ कि उनले आफ्नो छातीमा धेरै चोरी चोटबाट मृत्युको निधन गरे।
खोजीकर्ताहरूले शिकारको शरीरबाट समर नमूने र अनुहारको स्क्रैपिंग एकत्र गरे। प्रहरीले दुर्व्यवहारको कारबाट अपराधीलाई छोडेका थिए।
चार दिनपछि प्रहरीले ट्राफिक उल्लङ्घनका लागि निक यररलाई रोक्यो। दिनचर्या रोक्न यरिस र गश्तीम्यान बीचको हिंसक टकरावमा बढ्यो र पुलिस अधिकारीको हत्याको लागी यारिसको गिरफ्तारीमा समाप्त भयो।
यरिस 'बहिष्कार गरिएको छैन'
अझै पनि हिरासतमा हुँदा, यरिसले आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न लिंडा क्रेगको हत्या गर्ने परिचिततालाई आरोप लगाए। जब यो कथित संदिग्ध अन्वेषकहरु द्वारा सफा गरियो, यारिस हत्या को जांच मा मुख्य संदिग्ध बन्छ।
सङ्कलनमा प्रदर्शन गरिएको पारंपरिक परीक्षणले यरिसलाई संदिग्धको रूपमा बहिष्कार गर्न सकेन। अभियुक्तहरूले पनि पीडित सहकर्मीहरूले जेलहाउस सूचनाकार र पहिचानको गवाहीमा भरोसा राखेका थिए, जसले उनीहरूलाई दोषी ठहराएपछि यारिसले मानिसलाई हारेका थिए।
श्रीमती क्रेगले म्यान मा अन्य पुरुषहरु द्वारा डराए पछि शिकायत गरे र मल कर्मचारीहरु अपहरण र हत्या को समय को नजिकै नजिकै को नजिकै के पास नजिकै यरिस को अन्य पुरुषहरु लाई देखे। तथापि, 1982 मा निकोलस यारिसलाई हत्या, बलात्कार र अपहरणको सजाय दिइएको थियो। उहाँ मृत्युको सजायमा हुनुहुन्थ्यो।
यरिसले सधैं आफ्नो निर्दोष घोषणा गरे। 1 99 8 मा, उनले पेन्सिल्वेनियाको पहिलो मृत्यु पंक्ति कैदीहरूलाई एकपटक आफ्नो निर्दोष प्रमाण साबित गर्न पछि सजाएको डीएनए परीक्षणको माग गर्न चाहन्थे। यो विनाश पछि हत्या शिकार लिंडा क्रेगको कारमा पाइने दस्ताहरु संग सुरू भयो। उनीहरु साता साताको कोठामा बसेका थिए भने कसैले कसैलाई जैविक सामाग्रीको लागि परीक्षण गर्थे। 1 990को दशकमा विभिन्न विभिन्न टुक्राहरूको डीएनए परीक्षणको दौड गरियो, तर सबै निर्णायक परिणामहरू उत्पादन गर्न असफल भयो।
डीएनए प्रयोग गरिएको अन्तिम
2003 मा, डा एडवर्ड ब्लेक पीडित कार मा भेटिएको दस्ताने मा परीक्षण को अंतिम दौर आयोजित गरे, पीडित देखि उछरा scrapings, र शेष शुक्राणु पीडित underpants मा भेटिन्छ। डीएनए प्रोफाईलहरूले दस्तानेबाट प्राप्त गरेका छन् र शुक्राणु प्रमाणहरू एउटै व्यक्तिबाट उत्पन्न हुने देखिन्छ। यी परीक्षणहरूले यो अपराधसँग जोडिएको सबै जैविक सामग्रीबाट निकोलस यरिसलाई हटाइएको थियो।
सेप्टेम्बर 3, 2003 मा डा। ब्लेकको नतिजामा आधारित अदालतले यरिसको सजायलाई खाली गर्यो, र उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको 140 औं व्यक्तिलाई विच्छेदित डीएनए परीक्षणद्वारा बहिष्कार गर्न - मृत्यु रङबाट 13 औं डीएनए पुष्टिकरण र पेंसिल्वेनियामा ।
यरिस अझै पनि फ्लोरिडामा सेवा गर्न 30 वर्षको सजाय थियो, तर जनवरी मा।
15, 2004, फ्लोरिडाले आफ्नो वाक्यलाई 17 वर्ष (समय सेवा गरिसकेको) लाई कम गर्यो र उनको रिहाई दिए। अर्को दिन, निक यारिस अन्तर्वार्तामा पेन्सिल्सिन्की जेलबाट 21 बर्ष भन्दा बढी बेरोजगार अपराधको लागि जेलबाट मुक्त भए पछि डीएनए सबूत भन्छन् कि तिनले गरेनन्।
फिलिप मर्कौफको प्रोफाईल पनि क्रेग्सलिस्ट किलरको रूपमा जान्छ
डेनिस रडरको प्रोफाइल - बीटीके अङ्ग्रेजी
चार्ल्स म्यानसन परिवार
जॉन ई डु डु पन्टको प्रोफाइल
आइडियाहो किशोर किलर सारा जॉनसनको प्रोफाइल
भ्रूण अपहरण: केरिथिया करी प्रकरण
क्रिस्टिना पेर्री - "एक हजारौं वर्ष"
10 मेक्सिकोबाट टेक्सासको स्वतन्त्रताको बारेमा तथ्य
न्यूटनको कानूनको अभ्यास व्यायाम
तपाईंको चढाईको रोप हेरचाह गर्नुहोस्
कार्यपत्रकहरूमा कारक विधि प्रयोग गर्नुहोस्। PDF को दोस्रो पृष्ठमा जवाफ
ईगल को सदस्यहरु द्वारा शीर्ष '80s सोलो गाने
गुरु गोबिन्द सिंहको 52 हकुम के हो?
शीर्ष5Conifer-हत्या कीराहरू
अडिशन गल्ती तपाईं कसरी बनाउन सक्नुहुन्न
6 चीजहरु तपाई चिप र जोन्ना लाभ को बारे मा नहीं जानते थिए
6 ट्रिक्सहरू र राम्रो बोल्डरिङका लागि सुझावहरू
अर्डरर्क: नोन्टर्नल कीट-ईटर
प्रमुख बोधिसत्वास को थिए?
के शब्द "पिकनिक" व्यभिचार छ?
ग्रीक मिथोलोजी चित्र ग्यालरी: मेडुसा को चित्रहरु
अमेरिकी गृहयुद्ध: मेजर जनरल फिट्ज जॉन पोर्टर
अस्थिरता क्लस्टर गर्ने के हो?
ओलम्पिक बक्सिंग नियम र न्यायपालिका
बालबालिकाको चित्र पुस्तक स्कूलको 100 दिनको बारेमा
हरेक अजीब वस्तुहरू अजीब मानव चेतनाहरू छन्
के क्वांटम भौतिकीहरूले ईमानदारीको अस्तित्व बुझाउन प्रयोग गर्न सक्छन्?
न्यूनतम जोडा (फोनेटिक)
व्हर्लपूल ग्यालेक्सीको बारेमा सबै
गुणस्तर आश्वासन र सफ्टवेयर परीक्षण प्रमाणपत्र
फैट हानिको लागि वसा र आधारभूत शरीर निर्माणको आहार नियमको महत्व